Musangano - Dongguan Walley Machinery Technology Co., Ltd.
Zvishongedzo zvakashongedzerwa-zvakarongeka CNC machining musangano, ayo anogona kusangana nekuwedzera kugona kwevatengi uye zvemhando zvinodikanwa zvezvigadzirwa. CNC 4-axis machining uye CNC 5-axis muchina inokodzera yakaoma michina zvikamu, kudzikira kwakadzokororwa kukomba, uye kuona chigadzirwa chigadzirwa; Kubudikidza nekutendeuka uye yekugaya yakaoma kugadzirisa, zvikamu zvakaoma zvinogona kupedzwa.
CNC lathe machine machining yakakodzera mukugadzira ese marudzi eakakodzera zvigadzirwa zvehardware, senge isina simbi chaiyo zvikamu, aruminiyamu chiwanikwa chakanyatsojeka zvikamu, mhangura chiwanikwa chiwanikwa zvikamu; CNC lathe muchina unogona kusangana nemuchina chinodikanwa nemazvo zvigadzirwa zvakakura, otomatiki-lathe muchina unokodzera kwazvo kugadzira chaiyo chaiyo shaft zvikamu, senge refu shaft yakaringana zvikamu, yakaringana sikuruwa shaft kugadzira, nezvimwe.
Tine huwandu hwakawanda hweakarurama ekutsikirira mashopu emuchina kubva ku30T kusvika ku200T, tinogona kuwana zvakaringana machining zvinodiwa senge kuenderera kwekutsika, kumhanya-mhanya, uye hydraulic stamping, nezvimwe.
Radiator module yekugadzirisa musangano
Iyo yekupisa dissipation module yekugadzirisa ndicho chikuru chigadzirwa chekambani kwemakore mazhinji, iyo yakakura yekugadzira maitiro, iyo yakazara gungano mutsara, uye gumi tembiricha nzvimbo yekudzora kweiyo reflow soldering tambo kuverengera kugadzikana kuita kweye kupisa singi module.
Kune akawanda marudzi eiri radiator, anosanganisira anotenderera emhepo akateedzana ma radiator uye emvura kutenderera akateedzana ma radiator. Zvigadzirwa zvikuru zvinosanganisira LED radiator, CPU radiator, ekuchengetedza ma radiator, emagetsi ma radiator, inverter radiators, nezvimwe.